आजबाट काठमाडौं उपत्यकामा निषेधाज्ञा खुकुलो, के गर्न पाइन्छ, के गर्न पाइदैँन ? | Nepal Ghatana
आजबाट काठमाडौं उपत्यकामा निषेधाज्ञा खुकुलो, के गर्न पाइन्छ, के गर्न पाइदैँन ?
प्रकाशित : १८ भाद्र २०७७, बिहीबार ०७:०९
काठमाडौं उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञा तीनवटै जिल्लामा एक हप्ता थप गरिएको छ, तर अघिल्ला हप्ताहरुमा भन्दा केही खुकुलो बनाइएको छ ।
काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको बुधबार बसेको संयुक्त बैठकले उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञा केही खुकुलो पार्ने निर्णय गरेको हो ।
भदौ २४ गते राति १२ बजेसम्म लागू हुने गरी बुधबार साँझ एकै व्यहोराको निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरेका छन् । साथै बैठकले आजबाट ७ दिनका लागि निषेधाज्ञा थप गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । बैठकपछि उपत्यकामा निषेधाज्ञाको समयमा गर्न हुने र नहुने कामको सूची समेत एक विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा बिहान ११ बजेसम्म किनमेल र हिँडडुलका लागि खुकुलो गरिएको छ । त्यस्तै बैंकलगायतका नियमित सेवा प्रदायक संस्थाहरूले स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पालना गरी न्यूनतम कर्मचारी राखेर सेवा दिन सक्ने व्यवस्था गर्न समेत सक्ने जनाइएको ।
होटल, रेष्टुरेन्ट, फुटपाथ पसल भने पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुपर्ने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
हेर्नुहोस् काठमाडौं जिल्लाको निषेधाज्ञाको आदेश, अन्य काम के गर्न पाइन्छ, के पाइँदैन ? तलको तालिका हेर्नुहोस्ः